ရိုးရှင်း တဲ့ အမှုလို့ သတ်မှတ် ပြီးတော့ တရားစွဲ ထားသည့် အနုပညာရှင် များ၏ အမှု အခြေအနေ…. – Shwe Naung
ရိုးရှင်း တဲ့ အမှုလို့ သတ်မှတ် ပြီးတော့ တရားစွဲ ထားသည့် အနုပညာရှင် များ၏ အမှု အခြေအနေ….
N N | May 29, 2021 | Celebrity | No Comments
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ မေတိုးခိုင်တို့ ၃ ဦးအား ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် တရား စွဲဆို ဖမ်းဆီး ထားသော အမှုအား သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ တရားရုံးသို့ ယနေ့ တွင် အမှု စွဲတင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပိုင်တံခွန်၏ ရှေ့နေ ဖြစ်သူ ဥပဒေ အကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်က “ဒီနေ့ ရုံးတင် တရားစွဲ တာပါ။ ပြေတီဦး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ မေတိုးခိုင်အမှုက သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း ကနေ ဒီနေ့မှ အမှုကို စွဲတင် တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ထို့ပြင် ၅၀၅ (က) ဖြင့် တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးခံ ထားရသည့် မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်၏ အမှုအား တရားရုံး စွဲတင် ခဲ့သည့် မေလ ၄ ရက် မှ စတင်ကာ ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း အပြီး စစ်ဆေးသွားမည်ဟု မေလ ၂၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မှုခင်း စီမံ ခန့်ခွဲမှု အပြီး အစည်း အဝေး၌ ဆုံးဖြစ်ခဲ့ ကြကြောင်း ပြောသည်။
ဦးခင်မောင်မြင့်က “တဖက်က စစ်ဆေးမယ့် ဥပဒေ အရာရှိရယ် တရားသူကြီးရယ် ကျနော် တို့ရယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ က အဲဒီအမှုကို ရိုးရှင်းတဲ့အမှုလို့ သတ်မှတ် ပြီးတော့ တရားရုံးစွဲ တင်တဲ့နေ့
မေလ ၄ ရက်ကနေ ရက်ပိုင်း ၁၈၀ အတွင်း အပြီး စစ်ဆေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ လာမယ့် ဇွန်လ ၉ ရက်မှာ တရားလို ဒုရဲမှူး မျိုးမြင့်အောင်ကို စစ်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့ သစ်မြောက် ပိုင်းမြို့နယ် တရား ရုံးမှာပဲ စစ် မှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ထို့ပြင် ဥပဒေပုဒ်မ၂ ခုဖြင့် တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရသည့် သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်အမှုကိုမူ လသာမြို့နယ် တရားရုံးနှင့် မရမ်းကုန်းမြို့ နယ် တရားရုံးတို့တွင် ဇွန်လ ၁ ရက်နှင့် ဇွန်လ ၃ ရက်များတွင် စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အနုပညာရှင်များသည် သီးသန့် အကျဉ်းထောင်များတွင် ကျန်းမာစွာ ရှိနေကြပြီး သတင်းမှားများ မတင်ကြရန် ၎င်းတို့၏ ရှေ့နေက ပြောသည်။
“တချို့ Facebook မှာလည်း မမှန်မကန် ကောလဟလတွေ တင်နေကြတာ ရှိပါတယ်။ တရားရုံးမှာတော့ ကျနော်တို့နဲ့ တပတ်တကြိမ် နှစ် ပတ် တကြိမ် တရားရုံးရဲ့ချိန်းဆိုမှုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ တွေ့နေရတာပဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောနေကြ တာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ အား လုံးက ကိုယ်ရောစိတ်ရော ကျန်းကျန်းမာ မာပါပဲ။ အားလုံး ကျန်းမာမှုရှိပါတယ်။ ဆိုး ဆိုးရွားရွားအခြေအနေ တခုမှ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဦးခင် မောင်မြင့်က ဆိုသည်။
စစ်ကောင်စီမှ ဧပြီလ ၃ ရက်တွင် သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်အား ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သမိုင်း လမ်းဆုံတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၈ ရ က် တွင် မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်အား နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ဇနီးမောင် နှံကို သတင်းပေး သူတဦးကြောင့် ဧပြီလ ၉ ရက်တွင် ၎င်းတို့ နေအိမ် ၌ပင် ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ ရပြီး မေတိုး ခိုင်ကိုလည်း ဧပြီ ၁၄ ရက်တွင် စစ်ကောင် စီက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
“ရစ်ရစ်”ရဲ. အလန်းစား ဖက်ရှင် ပုံရိပ်များ…
ANDAMAN GOLD နဲ့ စာချုပ် ချုပ်မယ့် ကိစ္စကို သူ့ ဘက်ကနေ စတင်ဖျက် သိမ်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဖော်ကာ…
အမိုက်စား အားရပါးရ လှုပ်ခါပြီး ကပြလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ အသည်းယားစရာ…